10 विश्वव्यापी रूपमा असामान्य आकर्षणहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 विश्वव्यापी रूपमा असामान्य आकर्षणहरू
ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा चीन, ट्रेन यात्रा जर्मनी, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्कटल्याण्ड, ट्रेन यात्रा स्पेन, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
(Last Updated On: 07/12/2021)
यी 10 विश्वभरका असामान्य आकर्षणहरूले तपाईंलाई छक्क पार्नेछ. सिन्ड्रेला आकारको अग्लो हिलको चर्च, परी पहाडहरू, निलम्बित पुलहरू, र इङ्गल्याण्डमा एक विशेष सुरुङ – थोरै मात्र असाधारण र अलि अनौठो छन्, तपाईंले विश्वभर भ्रमण गर्नुपर्ने आकर्षणहरू.
1. विश्वव्यापी रूपमा असामान्य आकर्षणहरू: जुलियट बाल्कनी
रोमियो र जुलिएटको कथा भेरोनामा भएको थियो भनेर थाहा नभएका धेरै कम व्यक्तिहरू छन्. यसबाहेक, धेरै थोरै मानिसहरू रोमान्टिक बालकनी दृश्यसँग परिचित छैनन्. भेरोनामा घुम्नको लागि सबैभन्दा अद्वितीय आकर्षणहरू मध्ये एक जुलियटको बालकनी हो. बालकनी घरको भाग हो, whereaCappello family lived in the 13th century. तथापि, प्रसिद्ध बालकनी मा घर मा मात्र थपिएको थियो 20औं शताब्दीमा.
साथै, बालकनी युरोप मा सबैभन्दा प्रसिद्ध आकर्षण मध्ये एक भएको छ. जबकि रोमियो र जुलियटको कथाको सेटिङमा बालकनीको कुनै वास्तविक भूमिका थिएन, यसले हरेक वर्ष सयौं आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दछ. मायामा, मुटु टुटेको, सपना देख्नेहरू र शेक्सपियर उत्साहीहरू, आफ्नो प्रेमको नोट छोड्न आउनुहोस्, इच्छाहरू, र जुलियटको बालकनी मुनि भित्तामा भित्तिचित्र.
रिम्नी एक ट्रेन संग भेरोना
रोम एक ट्रेन संग भेरोना
एउटा ट्रेनको साथ फ्लोरेंस भेरोना
भेनिस एक ट्रेन संग भेरोना
2. परी ग्लेन, स्काई स्काय
कोन आकारको, रेशमी हरियो पहाडहरू, पोखरी र झरनाले घेरिएको, फेयरी ग्लेन आइल अफ स्काईमा घुम्नको लागि सबैभन्दा असामान्य ठाउँहरू मध्ये एक हो. जबकि अद्वितीय नाम को कुनै ज्ञात उत्पत्ति छैन, फेयरी ग्लेनको परिदृश्यमा विशेष आकर्षण छ.
फेयरी ग्लेनको उत्कृष्ट दृश्यहरूको लागि उत्तम स्थान क्यासल ओवेनबाट हो. यो ठाउँ वास्तविक महल होइन, तर बरु टाढाबाट महल जस्तो चट्टान गठन. परी ग्लेन एकदम सानो छ; त्यसैले, यसलाई किल्ट रकको भ्रमणको साथ संयोजन गर्नु उत्तम हुन्छ, Storr को पुरानो मानिस, र फेयरी पूलहरू.
3. इलेक्ट्रिक लेडील्याण्ड एम्स्टर्डम
संसारको पहिलो फ्लोरोसेन्ट कला संग्रहालय, को एम्स्टर्डममा इलेक्ट्रिक लेडील्याण्ड आकर्षण को को छ 10 युरोप मा असामान्य आकर्षण. यदि तपाईं संग्रहालयहरूको प्रशंसक हुनुहुन्न भने पनि, यो फ्लोरोसेन्ट संग्रहालय बच्चाहरु र वयस्कहरु को लागी एक महान अनुभव हो. फ्लोरोसेन्ट खनिजहरूको उल्लेखनीय संग्रहको अतिरिक्त, Ladyland ले 1950s देखि अद्भुत फ्लोरोसेन्ट कलाकृति प्रस्तुत गर्दछ. यसबाहेक, आगन्तुकहरूले कलाको आफ्नै काम सिर्जना गर्न भाग लिने अमूल्य मौका पाउँछन्, रंगीन रोशनीमा.
यो अचम्मको आकर्षण एम्स्टर्डमको जोर्डन जिल्लाको मुटुमा छ, जहाँ अँध्यारो तहखाने रंगीन बत्तीहरूले उज्यालो हुन्छ. जिमी हेन्ड्रिक्सको एल्बम इलेक्ट्रिक लेडील्याण्ड पछि नामकरण गरियो, यो सुन्दर आकर्षण सबै साइकेडेलिक कला र 70 को संगीत को बारे मा छ. निस्सन्देह, एम्स्टर्डमको इलेक्ट्रिक लेडील्याण्ड संग्रहालय संसारको सबैभन्दा रोमाञ्चक आकर्षणहरू मध्ये एक हो.
4. बुडे टनेल, कर्नवेल इङ्गल्याण्ड
कोर्नवाल सुपरमार्केट कार पार्क मा एक साधारण प्लास्टिक सुरुङ जस्तै हेर्दै, Bude सुरुङ एकदम असाधारण छ. यो असामान्य आकर्षण शीर्ष मध्ये एक हो 10 इङ्गल्याण्डमा आकर्षणहरू हजारौं एलईडी बत्तीहरू बहुरङमा प्रकाशको लागि धन्यवाद.
निद्रा बुडे शहर मा स्थित छ, को 70 m सुरुङ उज्यालो हुँदा जादुई हुन्छ. आउने सबैभन्दा राम्रो समय साँझ हो, परम प्रकाशको अनुभवको लागि. जबकि बुडे टनेल दिनको समयमा सादा देखिन्छ, रातमा यो संसारको आश्चर्य बन्छ, बेलायत भरबाट आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दै. तल लाइन, Bude सुरुङ एक हुन सक्छ युरोप भरि आफ्नो यात्रा मा रमाइलो रोक, जहाँ टेक्नोलोजीको साँचो चमत्कारले जवान र वृद्ध दुवैको आँखा र हृदयलाई उज्यालो बनाउँछ.
5. विश्वव्यापी रूपमा असामान्य आकर्षणहरू: स्प्रीपार्क जर्मनी
बर्लिनको मनोरञ्जन पार्क राम्रो समय थाहा छ, विशेष गरी यसको चरम मा 1969. स्प्रेपार्क आकर्षित गर्न प्रयोग गरिएको थियो 1.5 लाख आगन्तुक, यसको सवारी गर्न 40 केबिनहरू 45-मीटर फेरीस व्हील. Speerpark पूर्वी जर्मनी मा पुनर्मिलन सम्म सबैभन्दा लोकप्रिय आकर्षण थियो 1991.
आफ्नो चरम मा, आगन्तुकहरूले पागल रोलरकोस्टर सवारी गर्न सक्छन्, ग्रान्ड क्यान्यन वाटर राइड, र विशाल घुम्ने कपहरू. कटब्याकका कारण पार्कले आफ्नो लोकप्रियता गुमाएको छ, र परित्याग, स्प्रीपार्क बर्लिनमा घुम्नको लागि रमाईलो ठाउँ बनेको छ. यसबाहेक, परित्याग गरिएको मनोरञ्जन पार्क युरोपमा सबैभन्दा असामान्य आकर्षणहरू मध्ये एक भएको छ, जिज्ञासु आगन्तुकहरूको लागि पहुँचयोग्य र खुला.
सांघाईबाट टाढा छैन, गगनचुम्बी भवनहरू र पुरातन मन्दिरहरूबाट, तपाईंले अंग्रेजी शहरको छविमा अर्को वास्तुकला आकर्षण पाउनुहुनेछ. कोब्बलस्टोन सडकहरू, एउटा चर्च, मध्ययुगीन शहर वर्ग, र तपाईंलाई टेम्स टाउनमा स्वागत गर्ने चिन्ह.
टेम्स टाउन अन्तर्राष्ट्रिय उपनगरहरू सिर्जना गर्ने ठूलो योजनाको हिस्सा थियो, तर योजना कहिल्यै साकार हुन सकेन. त्यसैले, आज सांघाईका आगन्तुकहरूले केही प्रशंसा गर्न सक्छन् संसारमा सबैभन्दा शानदार गगनचुम्बी भवनहरू र चीनको लन्डनको सानो टुक्राको वरिपरि घुम्न रोक्नुहोस्.
7. क्यामिनिटो डेल रे मालागा
निलम्बित 100 घाँटीको पर्खालहरू विरुद्ध मिटर, क्यामिनिटो डेल रे स्पेनको सबैभन्दा अचम्मलाग्दो ठाउँहरू मध्ये एक हो. 2.9 किमी फुटब्रिज, 4.8 किमी पहुँच मार्ग, को 7.7 किमी लामो क्यामिनो बाँधको सेवा मार्ग हुन्थ्यो. तथापि, आज यो मलागा मा सबैभन्दा रोमाञ्चक पर्यटक आकर्षण मध्ये एक हो.
कैमिनिटोले धेरै यात्रुहरूलाई आकर्षित गर्ने एउटा कारण यसको स्थान हो. लस Gaitanes Gorge संग सेट गर्नुहोस्, चूना पत्थर र डोलोमाइट को एक उल्लेखनीय घाटी. त्यसैले, साँघुरो र झुण्डिएको पुल भए पनि, असामान्य आकर्षण Caminito del Rey Andalucia मा हेर्नै पर्ने ठाउँहरू मध्ये एक हो, विशेष गरी एड्रेनालाईन प्रेमीहरूको लागि.
8. विशाल गिलास स्लिपर चर्च ताइवान
मा खोलियो 2016, अग्लो हिलको गिलास विवाह चर्चले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अग्लो हिल जुत्ताको आकारको संरचनाको लागि गिनिज रेकर्ड राखेको छ।. विशाल गिलास चप्पल एक प्रसिद्ध विवाह स्थल हो तर कुनै वास्तविक धार्मिक समारोह छैन. तथापि, कतिपयले विशाल गिलासको अग्लो हिल सिन्ड्रेलाको जुत्ता जस्तो देखिन्छ भन्न सक्छन्.
ताइवानमा अग्लो हिलको चर्च छ 17.76 मिटर उचाइमा र यो भन्दा बढी मिलेर बनेको छ 300 रंगिएको नीलो गिलास, यसको दर्शकहरूमा लुकाउने प्रभाव छोड्दै. यो असामान्य आकर्षण ताइवानको बुडाई टाउनशिपको ओशन भ्यू पार्कमा अवस्थित छ.
9. विश्वव्यापी रूपमा असामान्य आकर्षणहरू: सुन्तला इटाली को युद्ध
Ivrea को कार्निवल स्थान लिन्छ3फ्याट मंगलबारको दिन अघि. यो अनौठो छुट्टीले मानिसहरूलाई विशेष बनाउँछ “युद्ध” Ivrea मा सडकहरू, एक अर्कामा सुन्तला फ्याँक्दै. रमाइलो खाना झगडा जस्तो लाग्दा पनि, सुन्तला को लडाई धेरै हिंसक हुन सक्छ, र धेरै सहभागीहरूले चोट र चोट छोडे.
हिंसात्मक आकर्षण थप हिंसात्मक घटनाको परिणामको रूपमा सिर्जना गरिएको थियो. भनिन्छ कि कुनै समय एक युवतीलाई दुष्ट मार्कुसले काटेको थियो. यद्यपि यो कथामा कुनै सत्यता छ कि छैन स्पष्ट छैन, जे होस्, हरेक वर्ष सयौं मानिसहरू सुन्तला कार्निवलमा उपस्थित हुन्छन्. यसरी, यसलाई इटालीको सबैभन्दा असामान्य आकर्षणहरू मध्ये एक बनाउँदै.
मिलान रोम एक ट्रेन संग
यो असामान्य आकर्षण पुरातन सहर फेन्जिङमा एक अद्वितीय दृश्य हो. चीनको प्रसिद्ध पुरानो सहर नहरहरूका लागि परिचित छ, र देखि 2014 यो अपसाइडडाउन घरको घरको रूपमा परिचित छ. घरमा प्रवेश गर्दा आगन्तुकहरूले फर्निचर र घरेलु सामानहरू फेला पार्न सक्छन्, पोल्याण्ड मा उल्टो घर जस्तै.
घर भित्र पसेपछि, तपाईले सबै कुरा उल्टो फेला पार्नुहुनेछ, त्यसैले यो बाहिरी भागमा मात्र होइन. जबकि यो आकर्षण मा केहि गर्न को लागी छैन, यो असामान्य वास्तुकला डिजाइन द्वारा मोहित र चाखलाग्दो हुन सक्दैन.
हामी मा एक ट्रेन सेव तपाइँ यी को लागी एक यात्रा को योजना मा मद्दत गर्न खुशी हुनेछ 10 संसारभरका असामान्य आकर्षणहरू.
के तपाइँ तपाइँको साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट "10 असामान्य आकर्षण विश्वव्यापी" इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Funusual-attractions-worldwide%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, र तपाईं / es / fr वा / de मा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ र अधिक भाषाहरू.
#आकर्षण असामान्य UnusualAttractions unusualattractionsworldwide
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप